Iphumla phi imiphefumlo? Isavenge esitsha sikaEthan Bush | Uncwadi lwangoku
"Iphumle phi imiphefumlo?" yifakelo entsha yesaga ene-Ethan Bush. Ewe, sele sithethile kaninzi malunga nale saga imnandi. Ewe, sidlan 'indlebe nombhali wayo. Kodwa hayi, asidinwa kukuthetha ngezi noveli zimangalisayo.
Kule mali, U-Enrique Laso usazisa ngolona lwaphulo-mthetho lunkwantisayo. Ukuba ukhangela incwadi entsha, ngokuqinisekileyo le ayizukukuphoxa.
Ngeli xesha, UBush ufumana umnxeba ovela kumhlobo wakhe olungileyo, uAgent Worth. Emva kweenyanga ezimbalwa ezama ukusombulula eli tyala, u-Worth uthathe isigqibo sokucela uncedo ku-Ethan, ongayi kuthandabuza umzuzwana ukushiya intuthuzelo yeofisi yakhe ukunceda lo mntu asebenza naye.
Intombazana ebulalayo ngendlela engaphaya kokuzonwabisa, izisa isebe lamapolisa laseKansas kuqala. Ulwaphulo-mthetho olunxulunyaniswe nencwadi edumileyo ethi "Ikhowudi ye-Da Vinci" kunye nabarhanelwa abaliqela abanemfonomfono egudileyo, iya kwenza ukuba iarhente ibuyele kwiqela layo elithembekileyo kwakhona. UMark charismatic kunye nentatheli uClarice Brown baphinda bangena endaweni, abaya kuba ziintsika eziphambili ekusonjululweni kwetyala.
Kule noveli, u-Enrique usazisa ku-Ethan oqolileyo ngakumbi. Ulindele umntwana kunye neqabane lakhe uLiz, unonxibelelwano ngakumbi nonina kwaye kubonakala ngathi ubomi bakhe busendleleni. Nangona kunjalo, isenendlela ende ekusafuneka yenziwe. Uyaqhubeka nezinto azithandayo xa kufikwa kumba wokuthatha ityala kunye nokungabothusi oogxa bakhe. Nangona kunjalo, kancinci kancinci yenaLo mlinganiswa osalwa nxamnye neziporho zakhe, uyakhula kwaye uyaphuculwa njengomntu.
Yincwadi ekucetyiswa kakhulu ukuba uyayithanda uhlobo olo. Ngeli xesha ewe Ndingacebisa ukuba ndifunde ezi ncwadi zingasentla, kuba ungumlinganiswa ontsonkothileyo kwaye kufanelekile ukuba wazi uhambo lwakhe.
Inoveli inesingqisho esifanelekileyo kunye nesiphelo esihle. Ngexesha lokufunda, umbhali udlala nathi, kwaye kunzima ukukhetha umrhanelwa. Yincwadi ekhawulezayo nekulula ukuyifunda, kuba kungenxa yokuba hook ukususela ekuqaleni.
Nangona ekuqaleni unokuba nokuchasana nomlinganiswa ophambili, ULaso ujongene nokubonisa iinkalo kwiarhente eyenza ukuba umfundi abe nomdla wokwazi okungakumbi malunga nomlinganiswa.
Ngethamsanqa ukwazi ukuba ikamva liphethe ntoni kulo mntu ukhethekileyo, asinanto iseleyo. Le ntwasahlobo incwadi elandelayo iza kuphuma, enesihloko esithi "Elona khephu limnyama.". Tic tac tic tac ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iphumla phi imiphefumlo? Ufakelo olutsha lukaEthan Bush
I-trilogy yeBronze yamahhashi. Inoveli yothando yakudala yale mihla